Kitra – «Amboaran’i Afrika»: mety tsy ho azo jerena ny lalaon’ny Cnaps sy ny TS Galaxy | NewsMada
Kitra – «Amboaran’i Afrika»: mety tsy ho azo jerena ny lalaon’ny Cnaps sy ny TS Galaxy
Hanainga, rahampitso alakamisy 12 septambra, ny Cnaps Sport, hiatrika ny lalao mandroso hiadiana ny amboaran’i Afrika, taranja baolina kitra. Fihaonana, hotanterahina atsy Afrika Atsimo, hikatrohany amin’ny TS Galaxy, ny alahady 15 septambra 2019. Araka ny fantatra, ao amin’ny kianjan’ny Durban ny hanaovana ny lalaon’ny roa tonta. Nanambara ny tomponandraikitry ny TS Galaxy fa efa tomombana tsara ny fiarovana ny delegasiona malagasy ka tsy misy ahina satria izy ireo mihitsy no mandray an-tanana izany. Mety ho “à huis clos”, io lalao io, izany hoe, tsy azon’iza na iza atrehina, tsy misy mpijery izany. Raha tsiahivina, misy famonoana ireo vahiny, amin’izao fotoana izao, any an-toerana ka mahatonga izao fanapahan-kevitra izao.
Na eo aza izany, vonona ny Cnaps Sport, efa nanoman-tena hatry ny ela. Tanjon’izy ireo ny handresy ity ekipan’i Afrika Atsimo ity any an-taniny na hitazona ady sahala. Marihina fa 18 mpilalao handrafitra ny Cnaps Sport, hiatrika ity fihaonana atsy Afrika Atsimo ity.
Ankoatra izay, ho tonga amin’ny alakamisy ho avy izao ihany koa ny Tout Puissant Mazembe, avy atsy RD Kongo, hifandona amin’ny Fosa Jr, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Lalao hotanterahina any Mahajanga, ny alahady 15 septambra. Efa vonona ihany koa ireo mpilalaon’ny Fosa Jr. Tanjon’izy ireo ny haka fandresena amin’ity lalao mandroso ity satria ho sarotra ny hiatrehana ity ekipan’i Kongo ity izay manana ny lazany sy ny fahaizany, any amin’ny fihaonana miverina.